Minista Intanet - Silbano Garcia, II.
Chọọchị Kraịst na United States
Nzukọ Kraist nke zuru ụwa ọnụ
Deba aha profaịlụ ọhụrụ nke Church
Melite profaịlụ nke Church nke di ugbu a
Gators maka Kraịst
Mahadum nke Michigan - Ụmụ akwụkwọ na Kraịst
Ndị Minista Ọchịchị Crossus - Sunset Church of Christ
Texas A & M University - Aggies Maka Kraịst
Lekwasị anya n'eziokwu
Ịchọ Ụzọ nke Onyenwe anyị
Isi Nye Ala eze
Oge ozioma nke uwa
Gịnị Ka Akwụkwọ Nsọ Kwuru?
Oku maka agba ohu ohuru
Bible JM Na-enyere Aka
Eziokwu maka Ụwa
Ụlọ Akwụkwọ Bible nke ụwa
Akwụkwọ na vidiyo
Akwụkwọ Ndị Kraịst
Ụlọ Akwụkwọ Lambert
Egwu Ahịa Hill Hill
Ọkụ Dị Mma
Egwú Ndị Kraịst
Akwụkwọ akụkọ nke eziokwu
Oziọma ahụ ekpugheghị
Network Broadcast Network Emergency
Nchịkọta Enyemaka Nsogbu Mberede
Nzuko ndi ozo nke Kraist
Chọọchị Mgbasa Ozi Ọhụụ nke Christ Inc
Enyemaka Mkpa Ọdachi
Ihe Mgbasa Oziọma
Akwụkwọ ozi ọma
Ozizi ndị ọzọ bụ ndị nkwusa ozioma
Anyị na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ maka ụka
Nhazi weebụ na Bochum
Ndabere Ngwa Ngwa
Nbanye na nchịkọta akụkọ gị Church Directory
Ozizi nke Silbano Garcia, II.
Silbano Garcia, II. eje ozi dị ka onye nkwusa ozioma maka ụka nke Kraịst, ọ bụkwa onye guzobere ndị ọrụ ntanetị. Na May 1, 1995 ọ na-enye aka n'iwepụta Ọnụ Ụzọ Ịntanetị mbụ maka ụka nke Kraịst n'ụwa nile a maara dika Church-of-Christ.org. Onyenwe anyi ejiriwo ya mee ka ise ato di iche iche, ma o meela umuaka 1,527 baptism n'ime aru nke Jisos Kraist. Naanị Chineke maara ọnụ ọgụgụ nke mkpụrụ obi ndị bịakwutere Kraịst site na ọmụmụ Bible anyị na ntanetị site na Ngalaba Ntanetị. A maara Nwanna Garcia dịka onye nkwusa ozioma na onye ọsụ ụzọ na ntanetị nke Ịntanetị. O nyewo aka iji nyere ọtụtụ narị ọgbakọ aka iji Internet mee ihe maka mgbasa ozi nke Oziọma Jizọs Kraịst.
Nwanna Garcia bụ Onye Kraịst na-anụ ọkụ n'obi nke na-agbasi ike n'okwu ya na ngosi ya. Ụzọ ọma ya maka ozi ọma nke ụwa na-efe efe, ohu nke Kraịst ga-agba gị ume. Chineke agọziwo Nwanna Garcia na onyinye nke mmeri ndị mmadụ gaa n'ahụ Jizọs Kraịst. Ogawo otutu mpaghara nke uwa n'inwe ike ikwalite ozioma nke Kraist na nzuko ozioma nke uwa n'etiti nzuko. Nwanna Garcia nọgidere na-eje ozi dị ka onye nkwusa ozioma bụ onye naanị mmasị bụ ịkwado ahụ nke Jizọs Kraịst Onyenwe anyị na Onye Nzọpụta anyị.
Tụkwasị Jehova Obi!
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ mgbasa ozi n'elu - budata ebe a: MP3
Oge ahụ abịawo!
Nwee Ike n'Ime Onyenwe Anyị!
onye bụ ụka Kraịst?
Gịnị bụ arịrịọ dị iche iche nke ụka nke Kraịst?
Ọkọ akụkọ ihe mere eme nke Mweghachi Mweghachi
Ole ụka ole Kraịst nọ?
Kedu ka esi ejikọta ụka dị iche iche na nzukọ?
Kedu ka esi eme ochichi nke Kraist?
Gịnị ka ụka nke Kraịst kweere banyere Bible?
Ndị òtù ụka nke Kraist hà kweere na ọmụmụ nwa agbọghọ?
Chọọchị Kraịst ọ kwenyere n'ebughị ụzọ kpebie?
Ntak emi ụka nke Kraịst na-eme baptizim naanị site na nmikpu?
A na-eme baptizim ime nwa?
Ndị ozi nke ụka hà na-anụ nkwupụta?
À na-ekpegara ndị nsọ ekpere?
Ugboro ole ka nri anyasị nke Onyenwe anyị riri?
Kedu ụdị egwu e ji eme ihe n'ofufe?
Okpukpe nke Kraịst hà kweere na eluigwe na hel?
Okpukpe Kraist hà kweere na purgatory?
Kedu ihe nke ụka si enweta nkwado ego?
Okpukpe Kraist nwere nkwenye?
Kedu otu mmadu si abanye onye uka nke Kraist?
na- Na aka
Chineke di ebube
Enyemaka: Otu esi emelite profaịlụ nke Church nke di ugbu a
Nyere: Otu esi meputa profaịlụ ohuru nke ndi otu
Mgbasa Ozi Philippines Philippines
Copyright © 1995 - 2020 Internet Ministri. Ozi nke ụka nke Kraist. Ikike niile echekwabara.
Kwenye Na Adreesị Ozi Ịntanetị *
Kwenye Na Okwuntughe *
Koodu nchekwa; *
Fields-akara na akara mmuke (*) na-achọrọ.